Ogaden News Agency (ONA) – Shiinaha & Itoobiya oo Kala Xidhiidh Furanaya, Ogow Sababta.
Shiinaha & Itoobiya oo Kala Xidhiidh Furanaya, Ogow Sababta.
Posted by Dulmane	/ June 7, 2018
Xog rasmi ah oo ay heshay Wakaalada Wararka Ogadenia ONA ayaa muujinaysa in ay dowlada China ka xidhiidh furatay wadanka Gumaysiga Itoobiya, oo kamid ahaa wadamada ay dowlada Shiinuhu dhaqaalaha badan kubixiso siwayna utaageerto.
Sida aan xogta kuhelay dowlada Shiinaha ayaa sheegtay in ay hakin doonta ama ay joojin doonto dhaqaalihii ay siinaysay wadanka Itoobiya, iyo waliba mashaariicdii hormarineed ee ay kawadeen wadanka Gumaysiga Itoobiya.
Dowlada Shiinaha ayaa sheegtay in ay wadanka Itoobiya ku khasaareen isla markaana ay lowga soo gaadhsiin waayeen kadib 10 sano oo si xidhiidh ah ay usiinayeen taageero dhinaca ciidanka iyo dhinaca hormarinta ah, taas oo wadanka Shiinuhu uu sheegay in ay waxba iska soo tari waayeen.
Wadanka Shiinaha (China) ayaa xukuumada Itoobiya siiyay 13 Billion oo Doller sanad kasta, wuxuuna shiinuhu sidoo kale xukuumada Gumaysiga Itoobiya amaahiyaa lacago aad ubadan oo taliska wayaanuhu uusan bixinin ila markaana gaadhay Balaayiin lacag ah.
Dowlada Shiinaha ayaa si indho la’aan ah taageero usiisay Itoobiya kadib markii dowlada Shiinaha uu hunguri kagalay Shidaalka ceegaaga wadanka lagumaysto ee Ogadenia, kaas oo dowlada Shiinuhu ay hada uun ogaatay cida dhabta ah ee talada wadanka Ogadenia ay ka go’do iyo cida dhalinteedka banaanka lataagan.
Taliska wayaanaha ayaa qudhiisu umuuqda mid usii jeeda dhinaca ree galbeedka kadib markii ay dhamaatay beentii ay isu sheegeen isaga iyo wadanka Shiinuhu, taas oo ahayd in siwada jir ah loo gumaada shacabka Soomaalida Ogaadeeniya loono boobo khayraadkiisa dabiiciga ah.